खाडीका नेपालीको संकट : कसैको तलब आउन छाड्यो, कतिले खाना किन्न पाएनन् ! «
खाडीका नेपालीको संकट : कसैको तलब आउन छाड्यो, कतिले खाना किन्न पाएनन् !
Published : 14 April, 2020 6:57 pm
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सारजहा सहरको एउटा भवनको दुई कोठामा ३० नेपाली कोचिएर बसेका छन् । यूएईमा अलपत्र परेका उनीहरूलाई यूएईकै प्रवासी नेपालीहरूले कोठा खोजेर राखेका हुन् ।मासिक १५ सय दिराम कमाइ हुन्छ भनेर सात महिनाअघि युएई गएका उनीहरूलाई कम्पनीले महिना मरेपछि १ सय ८ दिराम दिन थाल्यो । ६ महिनामा पनि तलबको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू एक महिना अघिबाट नेपाल फर्किने प्रक्रियामा लागेका थिए । १० जना त फर्किए पनि । तर त्यति नै बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अरू उतै रोकिए ।
त्यसको केही दिनपछि उनीहरू बसेको कोठामा बंगाली साहुले ताल्चा ठोकिदिए । कम्पनीबाट निकालिएका उनीहरू नेपाली राजदूतावासको बेवास्तामा पनि परे । केही दिन पार्कमा आकासमुनि रात बिताएपछि उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले एक महिनाका लागि कोठा खोजेर राखिदिएको छ । तर उनीहरूलाई खानेकुराको भने समस्या छ । लकडाउनका कारण सहयोग माग्न जान सक्ने अवस्था छैन । अलपत्रमध्ये एक युवकले टेलिफोनमार्फत अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौं । नेपाल सरकारले उद्धार गरेर आफ्नो देश पुर्याइ दिनुपर्यो ।’